समुन्द्र सतहदेखि १७०० मिटर उचाइमा ३४ सय हेक्टरमा फैलिएको रेसुङ्गा क्षेत्र गुल्मी जिल्लाका एघार गाविसमा पर्छ। प्राचीन युगमा ऋष्यशृंग ऋषि (जसले अयोध्याका राजा दशरथको सन्तान नजन्मेपछि पुत्रेष्ठी महायज्ञ गराएका थिए । र बल्ल भगवान राम लगायतका उहाँका भाइहरु जन्मनुभएको थियो ) ले तपस्या गरेको कारण यसको नाम रेसुङ्गा रहन गयको विश्वास गरिन्छ । सिद्धबाबा, विष्णु, शिव, गणेशलगायतका विभिन्न देवीदेवताका मन्दिरले पनि यो ठाउँको धार्मिक महत्वलाई बढाएका छन्। यहाँ भगवान राम र लक्ष्मण पनि ऋष्यशृंग ऋषिको दर्शन गर्न आएर यहाँ के को समस्या छ भनि सोध्दा पानीको समस्या ऋषिले बताएपछि आफ्नो धनुबाणले हानेर पानी निकालीदिएको रामकुवा पनि छ ।
पुग्ने कसरी?[सम्पादन गर्ने]
एकैदिनमा रेसुङ्गा घुमेर बास बस्न साँझ् तम्घास फर्किन सकिन्छ। अथवा रेसुङ्गामै पाल टाँगेर पनि रात बिताउन सकिन्छ। यहाँ होटल/लजको सुविधा भने छैन। भोलिपल्ट फर्केर तानसेनतिर आउँदा डेढघण्टा जतिमा कालीगण्डकी र रिडी खोलाको सङ्गम रिडी आइपुगिन्छ। धार्मिक दृष्टिले नेपालका बराहक्षेत्र र मुक्तिक्षेत्रको समकक्षमा आउने रूरूक्षेत्रको रिडीमा ऋषिकेशव, रूरू कन्या, भृगुतुङ्गेश्वर लगायत ४० भन्दा बढी मन्दिर घुम्न करिब दुई घण्टा लाग्छ। माघे सङ्क्रान्ति, कात्तिक-एकादशीलगायत ग्रहण आदिमा रिडी, कालीगण्डकीमा स्नान गर्दा पुण्य प्राप्तिका साथै आत्मसन्तुष्टि मिल्छ भन्ने विश्वास छ। रिडीबाट फर्किने क्रममा बाटोमै पर्ने पाल्पाको रणउद्देश्वरी मन्दिर ,भैरवस्थान मन्दिरको दर्शन गर्न सकिन्छ, जसको प्रमुख विशेषता ठूलो त्रिशूल हो। थप दुई दिनको समय छ भने, रेसुङ्गाबाट फर्केर पाल्पाको प्राकृतिक सुन्दरता र मगर संस्कृतिको नजीकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। तानसेनबाट चारघण्टाको पैदल बाटोमा पुगिने नेपालको ताजमहल रानीमहल गएर फर्किन सकिन्छ। वि.सं. १९५०-५४मा पाल्पाका बडाहाकिम खड्ग सम्शेरले आफ्नी प्रेमिकाको नाममा निर्माण गराएका यो महल तानसेनबाट उत्तरतर्फ कालीगण्डकीको किनारमा ढुङ्गाको पहरामाथि बनाइएको छ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=रेसुङ्गा&oldid=727060" बाट निकालिएको
गुल्मी जिल्लाका धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १३:२९, २ मे २०१९ मा परिवर्तन गरिएको थियो।